DAAWO “Cunug yar oo Mucjiso ah oo ku dhashay Hindia iyo Hooyadha dhashay Cunugaasi oo shooktay, Subxaanallah | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
DAAWO “Cunug yar oo Mucjiso ah oo ku dhashay Hindia iyo Hooyadha dhashay Cunugaasi oo shooktay, Subxaanallah
Published: March 19, 2014, 8:40 am
Hooyo u dhalatay wadanka India ayaa dhashay cunug mucjiso ah oo leh labo madax, ilmahan ayaa lagu tilmaami karaa mataano laakin waxa ay wadaagayaan sanbabka, wadnaha iyo caloosha walow madaxa uu yahay labo qofood .
Dr Shikha Malik oo ah dhaqtarada ku guuleystay inay dhaliso hooyada dhashay ilmahan ayaa sheegtay in ilmahan inta badan ay wadaagaan xubnaha hoose ee jirka halka kuwa kore ay gooni gooni kale yihiin.
Dhaqtarada ayaa intaa tilmaantay in cunugan Mucjisada ah markii uudhalanayay madaxiisa mid uu hurdayay mid uu oynayay , waxa ayna intaa raacisay in caafimaad ahaan ay jiraan xoogaa infaction ah hadana ay u socdaan daaweyn .
Aabaha dhalay ilmahan oo lagu magacaabo Subhash Sharma ayaa sheegay in xaaskiisa ay dareentay xanuun saa’id kabidna uu ula cararay isbitaalka halkaasi oo ay ku dhashay ilmahan mucjisada ah aad ayaa uga naxnay ayuu warkiisa sii raaciyay.
Hooyo Urmila oo 28 jir ah oo ah hooyada dhashay ilamahan mucjisada ay ayaa illaa hadda shooksan iyada oo aanan arkin ilmahaada yar laakin ,waxa la tusiyay sawirka ilmaha mucjisada ah.
Dhacdadan ayaa ah mucjiso rabaani taas oo ALLAH ugu talagalay in adoomihiisa ku cibra qaataan walow aysan aheen mid aduunka ugub ku ah arimaha nuucaan ah.